Qaybta tabobarka oo ah qaybta ugu muga iyo miisaanka weyn ee mac’hadka Beder, ayuu haddana mac’hadku siiyay tabobarro xirfadeedyo kala duwan in kaban labo kun oo shakhsiyaad iyo ganacsataba isugu jirta, si xal-waara loogu helo dhibaatooyinka shakhsiyaadka iyo bulshadaba soo waajayaha.
Cilmi-baadhistu waa habka lagu gaadho dhaqan-dhaqaale horumar sameeya iyo siyaasad xasiloon oo qaran leeyahay. Majaalkan cilmi-baadhista oo wali bulshadeena cid u kuur-gashay aanay jirin, ayuu mac’hadka Beder dusha u ritay inuu daboolo baahidan, gaar ahaan cilmi-baadhista heerka hay’adeed ah.
Sida caadiga ah, ganacsatada soomaalidu markay ganacsi abuurayaan waxey raacaan hab-dhaqameed isku mid ah, taasoo badanaaba keenta in ganacsigii istaago ama khasaaro, sidaa darteed, mac’hadka Bird wuxu kuu soo bandhigayaa talooyin wax-ku-ool ah oo lagu fardaaminayo ganacsigaaga iyo urukaaga.
Ku soo dhawaata Machadka Beder ee Cilmi Baadhista iyo Horumarinta:
Mac'hadka Beder ee cilmi baadhista iyo horumarintu (Beder Institute for Research & Development -Bird) waa xarun cilmi baadhiseed, tabobar iyo talo-bixineed oo madax banaan. Bird waxa uu qayb ka ahaan jirey xaruntii Beder ee Diraasaadka Mustaqbalka iyo Talo-bixinta, xaruntaas oo la aasaasay sanadkii 2008, iyadoo sanadkii 2012 isu bedeshay Jaamacadda Beder ee Caalamiga ah.